﻿﻿ XOG CUSUB: RW Kheyre oo Cadaadis xoogan ka helaya Xildhibaanadda, Beelaha Hawiye & Xafiiska Madaxweynaha (SABABTA) | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
XOG CUSUB: RW Kheyre oo Cadaadis xoogan ka helaya Xildhibaanadda, Beelaha Hawiye & Xafiiska Madaxweynaha (SABABTA)
Xildhibaanadda aqalka sare ayaa ku dhegan Ra’isul Wasaaraha dowladda Soomaaliya iyo afar kamid ah wasiiradiisa.
Senetor Muuse Suudi Yalaxow ayaa hogaaminaya Mooshinka ka dhanka ah Ra’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre, waxaana uu ku eedeeyay inuu ka dambeeyay in la rido madaxweynaha Hiirshabelle.
watch Hadaba, Shabakadda Codkagalmudug.com ayaa ogaatay sedex qodob oo cabsi gelineysa Ra’isul Wasaare Kheyre.
enter site 1- Waxaa uu ka cabsanayaa Beeshiisa: Ra’isul Wasaare Kheyre ayaa aad loogu eedeeyay inuu kasoo bixi waayay booska uu beesha Hawiye ku matalo waxaana uu marar badan sameeyay go’aano aysan ku farxin.
Arrinta ugu xoogan waxaa ay ka taagan tahay Hiirshabelle oo uu mucaarad xoogan ugala helayo Beelaha Abgaal iyo Xawaadle.
buy Lyrica in uk 2- Cadaadiska Madaxtooyadda: Sidoo kale Ra’isul Wasaare Kheyre ayaa cadaadis xoogan kala kulmaya xafiiska madaxweynaha gaar ahaan agaasime Fahad Yaasiin oo la aamisan yahay inuu yahay maskaxda ka dambeysa arrinta Hiirshabelle ee keentay in mooshin laga keeno Kheyre.
Xog la helay ayaa muujineysa in Madaxweyne Farmaajo uusan wax badan kala socon arrintan, laakiin Fahad Yaasiin uu bixiyay amarkii lagu riday Cosoble, waxaana ay arrintaas wel wel xoogan ku keentay RW Kheyre maadaama uusan awoodin inuu qaato go’aan gaar ah.
3- Xildhibaanada oo Midooba: Xildhibaano katirsan golaha shacabka ayaa xili hore ku dhaganaa RW Kheyre, laakiin waxaa haatan ku biiray xildhibaanadda aqalka sare.
RW Kheyre ayaa aad uga wal walsan in labada xildhibaan ay mideeyaan mooshinadda ay uga soo horjeedaan xukuumadiisa taas oo halis gelineysa jagadda uu hayo.
Si kastaba waxaa marar badan guul dareystay wadahadalo uu RW Kheyre ku doonayay inuu ku xaliyo xiisadahan ku hareereysan xafiiskiisa.